အဖြူရောင်နတ်သမီး Thu Dec 30, 04:26:00 PM GMT+8
AFTER2DAYS....HAY...HAY...HAY....;)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Thu Dec 30, 05:19:00 PM GMT+8
အစ်မချစ်လဲ ပျော်ရွှင်သာယာ ကောင်းမွန်သော နှစ်သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပါစေ..
အစစ အဆင်ပြေပါစေ.. ရည်မှန်းထားသမျှ အောင်မြင် ပြည့်စုံပါစေ...
စိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်း ပျော်စရာ တွေ့ဆုံပွဲလေး ဖြစ်ကြရအောင် ဆုတောင်းစို့ ...း)
Vista Thu Dec 30, 05:50:00 PM GMT+8
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ မမချစ် ဟိဟိ
rose Thu Dec 30, 05:57:00 PM GMT+8
Sunny Thu Dec 30, 06:31:00 PM GMT+8
Anonymous Thu Dec 30, 07:06:00 PM GMT+8
နောက်နှစ်ပြန်ဆုံမယ် အစ်မး)
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Thu Dec 30, 07:17:00 PM GMT+8
Nge Naing Thu Dec 30, 08:20:00 PM GMT+8
ညီမလေး Thu Dec 30, 08:34:00 PM GMT+8
ချစ်ချစ်အတွက်လဲ မင်္ဂလာရှိသော ၊ အလိုဆန္ဒများပြည့်ဝသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ ...
မောင်လေး Thu Dec 30, 09:18:00 PM GMT+8
တောင်းတဲ့ဆုနဲ့တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ပြည့်ပါရစေ အစ်မရေ...။
Happy new year ပါဗျာ...။
Anonymous Thu Dec 30, 09:20:00 PM GMT+8
အပြုံးပန်း Thu Dec 30, 09:37:00 PM GMT+8
2011 မှာ ပြန်...ဆုံကြပါစို့ရဲ့။
မေဓာဝီ Thu Dec 30, 10:53:00 PM GMT+8
တွမ်တိတန်းက ဖျာလိပ်နေရှာ ...
အဟောင်းအသစ် ပြောင်းလဲ ဖြစ်စဉ်ပါ။
(ဓမ္မသံစဉ်လေးဖြင့် ဆိုပါရန်) :)))
မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ ... အမချစ်ကြည်။
မချစ်ကြည် ပေးတဲ့ဆုတွေလဲ ပြည့်စုံရလို၏/ ပြည့်စုံကြပါစေ။
ငွေစန္ဒာ Thu Dec 30, 11:58:00 PM GMT+8
မိုးယံ Fri Dec 31, 12:37:00 AM GMT+8
အော်.. နောက်နှစ်မှ ပြန်တွေ့မယ်ဆိုလို့ .. လန့်သွားတာ.. လက်စသတ် မနက်ဖြန်ပြန်တွေ့မှာကိုးး...
ကဲ နှစ်ဟောင်းမှာ ညစ်တာတွေ အားလုံးထားခဲ့နိုင်ပြီး နှစ်သစ်မှာ ဖလန်းဖလန်း ထအောင်လန်နိုင်ပါစေ အစ်မရေ..
မြစ်ကျိုးအင်း Fri Dec 31, 04:35:00 AM GMT+8
မင်္ဂလာရှိသော ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နှစ်သစ်လေးဖြစ်ပါစေဗျာ..။
ကျနော်လည်း မချစ်လိုပဲ ဒီကွန်မန့်က ဒီနှစ်အတွက် နောက်ဆုံးပဲး)
Anonymous Fri Dec 31, 12:39:00 PM GMT+8
ဆလာမတ် ဘာရူး တာဟွန်း!!!
သိင်္ဂါကျော် Fri Dec 31, 01:35:00 PM GMT+8
2011 may brings all the best things to you.
pNwe Fri Dec 31, 03:03:00 PM GMT+8
Happy New Year.. ပါ။ :)
ZZZ Fri Dec 31, 05:26:00 PM GMT+8
Cheer & regards,
Kay Fri Dec 31, 05:50:00 PM GMT+8
ဘလော့ဂ် လိပ်စာ လေး..ခုမှ ပြောင်းလိုက်ရတယ်..
PhyoPhyo Sat Jan 01, 06:24:00 AM GMT+8
တန်ခူး Sat Jan 01, 08:28:00 PM GMT+8
မ ရေ... ကဗျာလေးဖတ်ပြီးပြုံးမိတယ်... ကဲ... နှစ်သစ်မှာပြန်ဆုံကြပြီ... ထွက်မပြေးကြေး... ပို့ စ်အသစ်ပေး... ချစ်ခင်ကြည်လင်အေးမြသော ၂၀၁၁ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ 
ဇွန်မိုးစက် Sat Jan 01, 09:09:00 PM GMT+8
မင်္ဂလာနှစ်သစ် နှစ်ထောင့်တစ်ဆယ့်တစ် ဖြစ်ပါစေ မရေ။း)
Anonymous Sun Jan 02, 09:19:00 AM GMT+8
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါနော် ၂၀၁၁ မှာ ကြည်အေး မန္တလေး လည်း လာလည်နိုင်ပါစေ လို့ဆုတောင်းနေပါတယ်
T T Sweet Mon Jan 03, 01:29:00 PM GMT+8
Happy new year ပါ အကြည်။ နေ့စွဲရေးရင် ၂၀၁၁ ကို ၂၀၁၀နဲ့ ဘယ်နှစ်ရက် မှားရေးနေဦးမလဲမသိဘူး၊
Moe Cho Thinn Tue Jan 04, 06:21:00 AM GMT+8
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါရစေ မမရေ..
အင်ကြင်းသန့် Sun Jan 16, 12:29:00 AM GMT+8
အစ်မချစ်ရေ....ဟက်ပီးနယူးရီးယား လို့အော်ဖို့ အရမ်းနောက်ကျနေပြီမို့လို့ မအော်ခဲ့တော့ဘူးနော်.....
“ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ” (((ဟမ်)))